Fifamoivoizana any Ambatondrazaka :: Mitaky ny hamerenana ny sakana amin’ny RN 44 ny mpitatitra • AoRaha
Fifamoivoizana any Ambatondrazaka Mitaky ny hamerenana ny sakana amin’ny RN 44 ny mpitatitra
Mikaikaika ny mpitatitra mihazo an’Ambatondrazaka noho ny faharatsian-dalana rehefa fotoam-pahavaratra, toy ny eo Andranokobaka, Andranofotsy sy Andilamena ary Imerimandroso. Mano­loana izany dia mitaky ny hamerenana ny fisian’ny sakana indray izy ireo rehefa fotoanan’ny orana.
“Tokony haverina aloha io sakana io mandra-pahavitan’ny lalana ho tara tanteraka. Tsy ho potika ny lalana raha misy izany satria tsy hisy mihitsy ny fiara afaka hifamezivezy fa rehefa avy ny orana dia tsy misokatra mihitsy ny lalàna. Tsy ny taksibrosy anefa no tena manimba ny lalàna fa ireo fiara vaventy”, hoy ny tompon’andraikitry ny kaoperativa Cotrasud, etsy Antohomadinika.
Raha ny feo henon’ireo mpitatitra eny an-toerana dia any amin’ny volana mey any mihitsy vao hanomboka ny fanamboarana ny lalana ny fitondram-panjakana. Raha ny nambaran’ny mpitatitra dia olana maro no haterak’ity faharatsian-dalana ity amin’ izao fotoana izao. Isan’izany ny fahataran’ny fiverenana sy ny fahatongavan’ny fiara satria raha amin’ny 3 maraina no tafiditra amin’ny tobim-piantsonana ny fiara dia lasa amin’ny 3 ora hariva izany. Anisan’ny tsy mamparisika ny mpandeha ihany koa izany. “Olana anisan’ny sedrainay ireo fa lasa mamoaka vola 5 000 hatramin’ny 10 000 ariary isaky ny fiara koa indraindray eny an-dalana homena ny mpanosika fiara”, raha ny fitarainan’ireo mpitatitra hatrany.
Hetsika karatany :: Hitarina amin’ny faritra hafa ny tetikasa Casef